Nhau - Kukadzi 2021 XJCSENSOR Multi-axis sensor nyowani chigadzirwa kuburitswa
Kubva munaKukadzi 2021, XJCSENSOR zvakateedzana zvakaburitsa mhando nyowani yemazhinji-axis simba sensor kubatsira kuvandudza indasitiri 4.0 yekuzvigadzira yakangwara kugadzira. Indasitiri 4.0 ndeyekuona iyo yakangwara michina yezvisikwa zviwanikwa kubva mukuvandudza, kuunganidza, uye kugadzirwa muchirongwa chekutenderera. Pakati pavo, iyo smart fekitori ndiyo inotakura yekuchenjera kugadzira, uye iyo system yekutonga, sechikamu chakakosha chekuwana smart smart kugadzira, haigone kuita kunze kwekutsigirwa kwesimba rekudzora system.
Saka kuitisa uye kutonga kwesimba kudzora system kunoitwa nehungwaru kubatsira kusimudzira kweIndasitiri 4.0?
Ngatinzwisisei misimboti uye mashandisiro emazhinji-axis simba sensors:
Multi-axis Sensor chinhu chinosungirirwa pachirobheni cherobhoti kuti chione masimba nema torque anoshandiswa kune chishandiso. Sezvo iri pakati pebhobhoti nechombo, inogona kuverenga mamiriro emasimba panguva yekushanda kwechishandiso.
XJCSENSOR mizhinji-axis simba zvigadzirwa zvinogona kuganhurwa kuita maviri-akabatana simba, matatu-akabatana simba, mana-akabatana simba, uye mashanu-akabatana simba zvichienderana nenhamba yekuyera matemo.
Zvinoenderana neiyo decoupling nzira, inogona zvakare kukamurwa kuita dhizaini dhizaini dhizaini uye matrix kudonhedza chimiro.
Uchishandisa musimboti wekudzvinyirira mhando mhando, ine zvakanakira kukwirira kwakaringana, yakakwira chiratidzo-kune-ruzha chiyero, yakanaka yakakwira uye yakaderera tembiricha hunhu, kukwirira kuomarara, kusimba kwakasimba, uye hwakasiyana hwakasiyana maitiro. Sensor yemukati ine mechiniki anti yekuwandisa dhizaini, yakasimba anti-kuwandisa kugona, uye inogona kuve yakasanganiswa Amplifier, iyo yekuburitsa chiratidzo ine akawanda mafomu ekusarudzwa.
Kuburikidza neakasarudzika nzira yekuumburudza dhizaini, diki crosstalk kukanganisa, kunyanya diki refu-refu crosstalk.
Chikamu chekumusoro cheiyo sensor chakasungirirwa pachiringi che robot. Uye chikamu chinofamba chakanamatirwa kudivi rekushandisa. Kana simba rikaiswa pane chishandiso, iyo sensor inoverenga chinhambwe icho chikamu chinofamba chasimuka kubva mukasi, zvinoenderana nehukuru hwekutama, iyo sensor inodzosera chiratidzo chemanhare kukombuta.
Chikumbiro chatiri kuona kazhinji neiyo sensor ndeye bhenji bvunzo yekushandisa. Robhoti yakabatanidzwa ne sensor uye gripper uye iri kuita chiito chekutenderera pane chigadzirwa. Iko inonzwa sensor kubatika ndipo panopihwa huwandu hwesimba hunofanirwa kuiswa pane mudziyo. Robhoti inogona kushandisa simba rakaganhurwa rakagadzwa neanogadzira uye inogona zvakare kuongorora iri simba. Izvi zvinoreva kuti chigadzirwa chinoedzwa pane chakapihwa simba uye simba rinotariswa kuona kana paine shanduko mune hunhu hwechigadzirwa.
XJCSENSOR 6 axis sensor musimboti
XJCSENSOR nhanhatu-axis simba sensor inotora musimboti wekudzvinyirira mhando mhando, iyo ine zvakanakira hombe torsional kuomarara, kukurumidza kupindura kumhanya, kukwirira kwakaringana, yakanaka yepamusoro uye yakaderera tembiricha hunhu, yakakwira chiratidzo kune-ruzha chiyero, kukwirira kuomarara, kusimba kwakasimba, uye zvakasiyana siyana saizi kugadzirisa.
Iyo sensor mukati ine echimakanika anti-kuwandisa dhizaini, iyo ine yakasimba anti-kuwandisa kugona. Inogona kuvakwa mukati pamwe neyekubatanidza gudzazwi. Iyo yekuburitsa chiratidzo ine akasiyana mafomu ekusarudzwa.
Kuburikidza neyakakosha dhizaini nzira dhizaini, iyo crosstalk kukanganisa kweiyo sensor idiki kwazvo, kunyanya iine diki refu-yenguva refu crosstalk kukanganisa.
XJCSENSOR 6 axis sensor zvimiro
XJCSENSOR nhanhatu-axis simba sensor inokamurwa muzvikamu zviviri zvinoenderana nenzira yekudzikisira: chimiro kudonhedza uye matrix dhizaini dhizaini.
Dhizaini dhizaini dhizaini: Iyo nhanhatu-axis simba sensor ine dhizaini dhizaini dhizaini ine chete matanhatu chiteshi zvinobuda, ayo ari matatu masimba (FX, FY, FZ) uye matatu ma torque (MX, YANGU, MZ), uye yega yega chiteshi yakazvimirira, kana imwe yemakiteshi akatakurwa, chete uyu mugero une chiratidzo chinobuda, uye mamwe magezheni haazove nechiratidzo chinobuda. Semuenzaniso, iyo XJC-6F yakateedzana ese ari matanhatu matanhatu axis simba maseru ane decoupling chimiro.
Matrix dhizaini dhizaini: Iyo nhanhatu-axis simba sensor ine matrix dhizaini dhizaini inowanzo ine 6 ~ 12 chiteshi zvinobuda, uye yega yega yekubuditsa chiratidzo inosunganidzwa neumwe neumwe, kana imwe yeiyo chiteshi ikatakurwa, mimwe migero ichave neyekuburitsa chiratidzo, uye iyo sensor inoda kuunganidza masaini Iwo matatu mauto (FX, FY, FZ) uye matatu ma torque (MX, YANGU, MZ) anogona kuwanikwa nebhokisi kudonhedza matrix mashandiro. Semuenzaniso, iyo XJC-6FM yakateedzana ese ari matrix ekudzikisa matanhatu-axis simba sensors.
XJCSENSOR 6 axis sensor sarudza nhungamiro
Kusarudza sensor yakakodzera kwakakosha. Kana iwe uchida chero sarudzo nhungamiro, pls inopa zvinotevera
1. Nharaunda yekushandisa:
Ruzivo nezve kuti rwunosangana negasi rinoparadza here kana mvura. kushandiswa kwemukati kana kwekunze; kushanda tembiricha; zvinodzivirirwa padanho remvura; magnetism akasimba kana kupindira kwakasimba nharaunda, etc.
2. Vipimo uye nzira dzekumisikidza.
Iyi katarogu inopa chete saizi uye chimiro chezvinhu zvakajairika zvigadzirwa. Kana chimiro uye saizi mune ino katalog zvisingaenderane nezvinodiwa, ndokumbira upe saizi inoenderana uye nzira yekumisikidza. Tinogona kuzviisa pazvinodiwa. Kurumidza uye yepamusoro-soro isiri-yakajairwa yakagadzirirwa sevhisi ndeimwe yemabhenefiti edu makuru.
3. Iyo chaiyo yekuyera chiyero che sensor
Kugadzira iyo sensor inochengetedza kugadzikana kwenguva refu, tinokurudzira kuti iyo yepamusoro kuyera simba uye torque hazvipfuure makumi masere kubva muzana emagetsi ekugona.
4. Kuyera kunyatsoita zvinodiwa
Iko kusarongeka kwekukanganisa kwedu kwakajairika matanhatu-axis simba sensor imwechete chiteshi iri mukati me0.5% FS, iko kudzokorora kukanganisa kuri mukati me0%% FS, uye iyo crosstalk kukanganisa iri mukati me3%. High-chaiyo sensors anowanikwawo.
5. Zvemagetsi interface zvinoda
Yedu nhanhatu-axis simba sensor ine hupfumi hweanalogog kana dhijitari yekubuditsa modes yekusarudza. Analog kuburitsa: mV, V, mA; Dhijitari kuburitsa: EtherCAT, Ethernet, RS232 kana CAN bhazi, nezvimwe;
Kana zviratidzo zviri pamusoro zvisingakwanise kuita zvaunoda, XJCSENSOR inogona zvakare kugadzirisa dzimwe nzira dzekuburitsa chiratidzo.